Derek Chauvin ayaa lagu helay dambi ah inuu dilay George Floyd - Jowhar somali news leader
Home NEWS Derek Chauvin ayaa lagu helay dambi ah inuu dilay George Floyd
Kadib wax ka yar maalin iyo ku dhawaad ​​toban saacadood oo wada tashi ah, waxay ku yimaadeen go’aankoodii. Markay ahayd 23.05, waqtiga Sweden, ayuu qaaliga Peter Cahill akhriyay xukunka. Expolis Derek Chauvin waa dambiile dhamaan sedexda dacwadood.
Afar daqiiqo kadib, isaga oo katiinadaysan ayaa loo qaaday xabsiga. Garsooruhu wuxuu xukumay inuusan sii wadan doonin xoriyaddiisa damiin ilaa xukunkiisa siddeed toddobaad gudahood.
Previous articleThe jury finds ex-policeman Derek Chauvin guilty of murder in George Floyd’s death
Next articleAmericans, world leaders react to the Chauvin conviction